Ny kinova Chrome ho an'ny birao manaraka, hametra ny fampiasana plugins | Vaovao momba ny gadget
Nandritra ny taona 2016, Chrome dia nahavita naka ny laharana ho mpitety tranonkala be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, ao amin'ny kinalan'ny birao, mandany 50% ny anjarany, raha nitotongana kosa ny Internet Explorer / Microsoft Edge noho ny tsy fisian'ny fanavaozana ny fitetezana anao, ny fanavaozana dia elaela kokoa noho ny nandrasana tamin'ny voalohany. Izao dia manjaka eo amin'ny tsena i Google, Hanomboka hanao fanovana i Chrome, ka tsy ho tian'ny volo ny voloSatria mifandraika amin'ny plugins izy ireo, aza afangaro amin'ny fanitarana. Ny plugins Chrome dia ahafahantsika mampihetsika na manafoana ny fampiasana Flash na ny fisokafan'ny fisie PDF miaraka amn'ny navigateur mba hanome ohatra tsotra vitsivitsy.
Saingy toa manondro izany ny zava-drehetra Chrome 57 dia hametra ny fampiasana azon'ny mpampiasa atao amin'ny plugins, mba tsy hahafahantsika mitantana na ampanjifaina ny fampiasantsika Chrome, very ny fifehezana rehetra nanananay mandraka ankehitriny ary izany dia, ampahany, iray amin'ireo antony lehibe nahatonga azy io ho mpanjaka Avy amin'ny tsena. Amin'izao fotoana izao raha te-hanova ny fampiasana ny plugins ao amin'ny Chrome isika dia tsy maintsy miditra chrome: // plugins / ary zahao na esory ny boaty mifandraika amin'izany.
Ity famerana ity dia hanery anay hampiasa Chrome hanokatra rakitra PDF rehefa misintona azy ireo avy amin'ny tranokala ary tsy hahafahanay hanafoana ireo fanitarana haino aman-jery voahidy DRM. Raha tanterahina ihany io fetra io amin'ny farany, dia tsy hitsahatra tsy ho mpanjaka amin'ny tsena i Chrome, satria maro ireo mpampiasa tsy mampiasa plugins hanamboarana ny fiasan'ny rindranasao, saingy azo inoana fa ho antsika izay mampiasa mpitety tranonkala marobe noho ny mombamomba azy ireo dia handeha ho any Firefox ihany izahay, ary hamela an'i Chrome saiky hitokana tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ny kinova Chrome manaraka ho an'ny birao dia hametra ny fampiasana plugins
Nintendo dia namorona $ 53 tapitrisa tamin'ny Super Mario Run